Ny fahatsapana ny marika dia lakilen'ny marketing mahomby | Martech Zone
Ny Brand Perception dia lakilen'ny marketing mahomby
Zoma Janoary 1, 2021 Sabotsy, Janoary 2, 2021 Douglas Karr
Raha vao nitsidika an'i Chicago niaraka tamin'ny ray aman-dreniko aho taona maro lasa izay, dia nanao fitsidihana tsy maintsy natao tao amin'ny Sears Tower (fantatra ankehitriny hoe ny) izahay Willis Tower). Mandeha ireo sakana mankany amin'ilay trano ary miakatra - dia manomboka mieritreritra momba ny fahagagana momba ny injeniera ianao. 4.56 tapitrisa metatra toradroa ny haavony, 110 metatra ny haavony, naharitra 3 taona ny fananganana ary nampiasa simenitra ampy hanaovana arabe valo, dimy kilometatra ny halavany.
Avy eo dia miditra amin'ny ascenseur ianao ary miakatra 103 rihana mankany Skydeck. Amin'izay fotoana izay, 1453 metatra ambonin'ny tany, adinonao ilay trano. Ny fijerena ny any Chicago, ny Lake Michigan, ary ny faravodilanitra dia manosika anao hiala. Ny fiheverana dia miova tanteraka hatramin'ny fototr'ilay trano ka hatrany an-tampony.
Misy ny olana amin'ny fahitana… izany dia mitarika antsika hivily lalana. Raha mijanona eo ambanin'ny Willis Tower foana ianao, dia tsy hankasitraka ilay tanàna mahatalanjona hijoroanao ianao. Izahay dia mpivarotra no manao azy. Izahay dia mametraka ny orinasanay na ny vokatra na ny serivisy ho ivon'ny fiainan'ny mpanjifanay. Mihevitra izahay fa izahay no trano lehibe indrindra manerantany. Mety ho lehibe isika, nefa ho an'ny tanàna - iray amin'ireo tranobe an'arivony ianao.
Indraindray ny mpanjifanay dia manontany anay momba ny fampivoarana tambajotran-tserasera tsy miankina sy miankina amin'ny mpanjifa. Tohina izy ireo rehefa milaza aminy izahay fa tsy dia zava-dehibe izy ireo. Izy ireo dia manome mpanjifa an'arivony maro ananany, ny toerana misy eo amin'ny sehatry ny indostria, ny manam-pahaizana ananany momba ny mpiasa, ny isan'ny antso an-tariby azon'izy ireo, ny isan'ireo hits ny tranonkalany, yada, yada, yada. Mandefa ny tambajotra izy ireo… tsy misy miraharaha. Tsy misy olona tonga. Ankehitriny dia nokapohina ny ego ary menatra izy ireo… noho izany dia manao zavatra toa ny fanerena ny mpanjifa hampiasa ilay tambajotra ho fanohanana izy ireo, miditra an-tsokosoko ho azy ireo, ary manery ireo tompon'andraikitra tompon'andraikitra hampitombo ny haben'ny fitomboan'ny tambajotra. Misento kosa izy.
Raha azon'izy ireo ny fahitan'ny mpanjifa azy dia tsy handeha amin'io lalana io mihitsy izy ireo. Ho fantatr'izy ireo fa ampahany kely amin'ny andro fiasan'ny mpanjifa amin'ny ankapobeny izy ireo. Angamba tafiditra ao anaty slot 15-minitra indray mandeha isan-kerinandro izay natokan'ny mpanjifa hampiasa ny vokariny izy ireo. Raha azon'izy ireo ny fahatsapan'ny mpanjifany dia angamba izy ireo nanery ny hijanona ho mailaka sy hamaly ny filan'ny mpanjifa fa tsy hampiasa vola amin'ny zavatra tsy ilain'ny mpanjifany na tadiaviny. Raha tokony hamorona tambajotra sosialy ianao dia angamba namorona tonian-dahatsoratra nohatsaraina, fizarana FAQ, na nametraka horonan-tsary fanampiny momba ny fomba fampiasana tsara indrindra ny fitaovan'izy ireo.
Ny fahatsapana dia tsy ny fihainoana ny mpanjifanao fotsiny, fa ny fahatakarana ny orinasanao amin'ny fomba fijerin'izy ireo:
Fantaro ny fomba, oviana ary ny antony ampiasan'izy ireo anao.
Fantaro izay tian'izy ireo aminao sy izay mahasosotra azy ireo.
Fantaro izay hanamora ny fiainan'izy ireo hiara-miasa aminao.
Fantaro ny fomba hanomezanao azy ireo lanja bebe kokoa.
Rehefa azonao izany, ampiasao io fomba io amin'ny varotrao. Mety ho tsara kokoa aminao ny tsy manisy lisitra ireo fiasa 438 nampidirinao tamin'ny famoahana farany - ary ekeo kosa fa fantatrao fa sahirana amin'ny asa lehibe kokoa ny mpanjifanao… fa mandritra ny 15 minitra ilany anao, eo foana ianao .
Tags: Chicagofanehoan-kevitry ny mpanjifafomba fijerin'ny mpanjifamihainofomba fijerytilikambo searstilikambo willis
Trano repurpose: mitondra fiara mifamezivezy bebe kokoa ary mitarika amin'ity serivisy votoaty haino aman-jery sosialy azo zaraina ity
Inona avy ireo karazana Internet (Maizina, lalina, ety ivelany & mazava)?
Mar 14, 2013 amin'ny 4: 58 AM
Miombon-kevitra tanteraka aminao aho Douglas! Raha tsy fantatrao ny mpanjifanao sy ny anjara asanao eo amin'ny fiainany, dia tsy afaka mamolavola fanentanana ara-barotra mahomby ianao. Zava-dehibe ny fiheveran'izy ireo ny orinasanao mba hahombiazana amin'ny tsena sarotra.
Mar 14, 2013 amin'ny 7: 34 AM
lahatsoratra mahafinaritra (toy ny mahazatra), Doug!